केसीसँग वार्ता गर्नका लागि सरकारले पर्याप्त पहल गरेन : डा. उपाध्यक्ष पौडेल | रिपोर्टर्स नेपाल केसीसँग वार्ता गर्नका लागि सरकारले पर्याप्त पहल गरेन : डा. उपाध्यक्ष पौडेल
२०७५ चैत्र ४ सोमबार, ०७:३६
काठमाडौं, २७ असार । नेपाल चिकित्सक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा. ढुण्डीराज पौडेलले गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्नका लागि सरकारले पर्याप्त पहल नगरेको आरोप लगाए ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै पौडेलले केसीसँग वार्ता गरेर चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि श्वेत पत्र जारी गर्न सरकारलाई सुझाब दिए । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधार र केसीको जीवन रक्षाका लागि तत्काल वार्ता गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
चिकित्सा शिक्षालाई सरकारले निजिकरण गर्न खोजेका कारण गोविन्द केसी अनशन बस्न बाध्य भएको पौडेलको आरोप थियो । नेपालको चिकित्सा सेवा काठमाडौं केन्द्रित भएको भन्दै उनले जुम्लामा खोलिएको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आधारभूत सेवा समेत हुन नसकेको बताए ।
अहिले मेडिकल कलेजको मान्यताका लागि भइरहेको चलखेल कमिसन र चन्दाका कारण भएको उनले बताए । “चुनावमा निजी क्षेत्रसँग चन्दा मागियो । अहिले तिनै व्यक्तिको मेडिकल कलेज जोगाउनका लागि सरकार लागिपरेको छ । अनि कसरी जनताको हितमा विधेयक बन्छ रु” पौडेलले भने ।
पौडेलले रिपोर्टस क्लबमा भएको बहस फलदायी हुने भन्दै आजको बहसले पनि एउटा निश्कर्ष निस्कने विश्वास व्यक्त गरे । विगतमा पनि डाक्टर केसीको अनशन र मागका बारेमा क्लबका सभापति ऋषि धमलाले एजेण्ढा उठान गर्दा सहमति जुट्ने गरेको पौडेलले सुनाए ।
२०७५ असार २७ गते प्रकाशित, l १४:३५